हामी संघीय प्रणालीको बिरोधी होईन, नेपालले धान्न सक्दैन भन्ने चिन्ता हो : चित्रबहादुर केसी
संघीयताको मुद्दा उठाएकाहरुलाई नै अहिले न्याउरी मारी पछुतो भएको छ
२०७७ असोज २३ शुक्रबार १२:२२:००
सत्ता समर्थक राष्ट्रिय जनमोर्चा संघीयता विरोधी एकमात्र राजनीतिक पार्टी हो । सरकारमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई समर्थन गरेपनि जनमोर्चाले सरकारका गलत कामको संधै आलोचना गर्दै आईरहेको छ । नेकपासंगकै चुनावी तालमेलमा संघीय संसद र प्रादेशिक सभामा अस्तित्व जोगाएको जनमोर्चा र उसको माउ पार्टी नेकपा (मसाल) संघीयताका सन्दर्भमा भने नेकपाको ठीक विपरीत उभिएको छ । पछिल्लो पटक संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको विवादले ठूला दलहरुलाई नै संघीयता भालुको कन्पट भैसकेको उसको बुझाई छ । प्रस्तुत छ–संघीयता,सरकारका काम र कोराना नियन्त्रणसहितका विषयमा जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीसंग टिभी अन्नपूर्णले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
कस्तो छ स्वास्थ्य ? के मा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल ?
स्वास्थ्य ठिक छ, आजका दिनसम्म । व्यस्तताको कुरा गर्दा सञ्चारकर्मी साथीहरु आउनुहुन्छ, उहाँहरुसँग विभिन्न खाले बहसमा सहभागी हुन्छु,पार्टीको काम गर्छु । पत्रपत्रिका र किताबहरु पढ्छु, यसरी नै समय जाने गरेको छ ।
नेपालमा संघीयताको घोषणा गरेको १२ वर्षका बीचमा संघीयताका विषयमा असन्तुष्टि चुलिएको संकेत मिल्दैछ । के तपाईहरुको एजेण्डा स्थापित भएको हो ?
हो , एकदमै सहि भन्नुभयो । पहिलो संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ पार्टीमध्ये हाम्रो पार्टी बाहेक सबै पार्टी संघीयताका पक्षमा उभिएका थिए । हामीले संघीयताका बिरुद्धमा शान्तिपूर्ण आवाज उठाउँदा हामीमाथि चौतर्फी आक्रमण भए । काठमाण्डौंकै डिल्लीबजारमा हाम्रा एकजना साथीको त दिनदहाडै नाक काटियो । म आफैंलाई मार्ने धम्की आएपछि यहि वरिपरि शसस्त्र प्रहरीले पहरा दिनुपर्ने अवस्था आयो । संघीयताको बिरोधमा देशवासीलाई सचेत बनाउने हाम्रो अभियानमा धरपकड भयो । अनेक खालका डरधाक,धम्की दिएर हामीलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न भयो । तर यो बुझ्नुपर्छ कि हामी संघीय प्रणालीको बिरोधी होईन । संसारको धेरै मुलुकको अनुभवले नेपाल जस्तो मुलुकले यसलाई धान्न सक्दैन भन्ने हाम्रो भनाई हो । यो सेतो हात्तिले देशको अर्थतन्त्र तहसनहस पार्ने काम त हुन्छ नै,त्यसमाथी मिलेर बसेका दाजुभाईबीच एकआपसमा द्वन्दको बिऊ सिर्जना गर्छ भन्ने हाम्रो जुन अडान थियो । हामीले यो भनिरहँदा पनि जबरजस्त यहाँ जसरी संघीयता थोपरियो । अहिले यो धेरैले बुझेको अवस्था हो ।
तपाईंहरुले संघीयताको बिरोध त गर्नुभयो । तर अहिले तपाईंहरुका कारण भन्दा पनि जसले संघीयताको एजेण्डा बोकेका थिए,उनीहरु नै कार्यान्वयनमा चुकेपछि तपाईहरुको एजेन्डा बलियो बन्ने अवस्था आयो हैन ?
त्यस्तो होईन, हामीले संघीयता गलत छ भन्ने कुरा त २०६४ सालदेखी नै भन्दै आएका हौं नि । संघीयता कार्यान्वयन गर्न त यहाँको सामाजिक आर्थिक, भौगोलिक कुनैपनि कारण सम्भव नै थिएन । संघीयताको नारा त उनीहरुलाई नेपालजस्तो अर्ध औपनिवेशिक,अर्ध सामन्ती देशमा बाहिरकाले बोकाएको एजेण्डा न थियो । शक्ति राष्ट्रले दिएको दबावलाई थेग्न नसकेर न उनिहरुले हामीले यो देशले धान्न सक्दैन भन्दाभन्दै बोकेर हिंडेका हुन । संघीयताको भारी हाम्रो जस्तो गरिब देशलाई बोकाएर यो देशलाई टाट पल्टाउने योजना त बाहिरको हो । यो कुरामा राष्ट्रिय जनमोर्चाले जुन अडान लियो, यसको जीत अब भईसकेको छ । तपाईहरुले देख्नुभएन अस्ति मात्रै प्रदेश राजधानी तोक्ने सवालमा संसदमै ढुंगामुढामा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको । यसैले फेरि पनि स्पष्ट हुनुहोस् कि नेपालमा संघीयता गलत छ , यो लागु हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो अडानमा उनै ठुला दल, जसले हिजो अर्कोले बोकाएको संघीयताको नारा बोकेर नेपालमा संघीयता घोषणा गरे, उनीहरुलाई समेत न्याउरी मारी पछुतो भईसकेको छ ।
तपाईंले भनेझंै हिजो संघीयताको मुद्दा बोकेका दलहरु नै यसबाट हच्किएका हुन् भने के उनीहरुले नेपालमा संघीयता गलत रहेछ भनेर सार्वजनिक रुपमै स्वीकार गर्लान् त ?
उनीहरुका कुरा गर्नुहुन्छ भने संघीयता नेपालका लागी उपयुक्त रहेनछ भन्ने भइसकेको छ । मलाई लाग्दैन, उतिबेला पनि नेपाली काँग्रेस र एमाले संघीयताका पक्षमा थिए । उनीहरुको अन्तर आत्माले संघीयता ठिक भन्ने सोचेको थियो भन्ने मलाई लाग्दैन । तर परिस्थिति त्यस्तै थियो, उनीहरु नचाहेर पनि त्यसको पक्षमा उभिन बाध्य भए । मैले माथि पनि भनें कि बिदेशीले बोकाएको संघीयताको भारी बिसाउनुपर्ने उनीहरुमाथि पनि ठूलो दबाव थियो । जहाँसम्म उनीहरुले कहिले नेपाल जस्तो मुलुकलाई संघीयताको भारी बोकाउनु गलत थियो भन्ने स्वीकार्लान् भन्ने जहाँसम्म कुरा छ, उनीहरुले धेरैपटक अनौपचारिक रुपमा भनिसकेका छन् । औपचारिक रुपमा यस्तो बोल्न अप्ठ्यारो भएको मात्रै हो ।
सामान्यतः राजनीतिमा सहि बिचार र सिद्धान्तसहितको एजेण्डा स्थापित गर्नेले नै जनताको मन जित्ने हो । तर तपाईंहरुले अघि सारेका एजेन्डा स्थापित हुँदै गएको हो भने,फेरि पनि जनमतमा राष्टिय जनमोर्चा सधै कमजोर किन ?
जनमोर्चा कमजोर भएकै छैन । कुनै पनि मुद्दामा आम जनतालाई एकाकार गर्दै जान र जनमत जुटाउदैं जान त समय लाग्छ नि । तर महत्वपूर्ण कुरा, आफ्नो नीति के हो ? यो राष्ट्र र जनताको पक्षमा ठिक छ वा छैन भन्ने सोच्ने हो । कुनै पनि राम्रा कुरा र प्रगतिशील बिचारमा जनमत तयार हुन समय लाग्छ । हाम्रोजस्तो पिछडिएको निजी खुसी,स्वार्थ र फाईदा मात्रै हेर्ने समाजमा रातारात हामीले सोचेअनुसार जनमत तयार हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका छैनौं । यस्तो हुन समय लाग्छ ।
तपाईले यसो भनिरहँदा, तपाईहरुले अघि सारेका बिचार र सिद्धान्त स्थापित गरेर धेरै पार्टी राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगे । तपाईहरु आज पनि त्यहीं हुनुहुन्छ त ?
होईन उनीहरु कुन त्यस्तो राम्रो सिद्धान्त स्थापित गरेर सत्तामा पुगे ? १७ हजारको हत्या गर्ने कथित जनयुद्धले के पाए जनताले ? खैं नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने भनेको कहाँ गयो ? लेनिनले जनताको मत जितेका थिए । माओले जनताको मन जितेका थिए र त्यत्रो शक्तिशाली जारको शासन ढलाएर त्यहाँ समाजवाद स्थापित भएको थियो । चियाङ काई सेकजस्तो अमेरिकाले बोकेको त्यत्रो शक्तिलाई माओ त्से तुङले पराजित गरेर चीनमा नयाँ जनवादी सत्ता कायम भएको थियो । हो चि मिन्हले भियतनाममा अमेरिकाका लाखौं अमेरिकीलाई धुलो चटाएर युद्ध सफल भएको थियो । तर नेपालमा बाबुराम र प्रचण्डले दिल्लीमा बसेर यहाँ ल्याएको परिवर्तन के हो ? नयाँ जनवादी क्रान्ति भयो ? मजदुर किसानले के पाए ? बेरोजगारले रोजगारी पाए ?
त्यत्रो जनयुद्धले तपाई केहि पनि परिवर्तन भएन भन्नुहुन्छ ? नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य, संघीयता, धर्म निरपेक्षता जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि गलत हुन् र ?
मैले यो उपलब्धि होईन भनेको छैन । तर के नेपालमा गणतन्त्र माओवादीको कथित जनयुद्धले मात्रै ल्याएको हो ? यसमा हाम्रो भूमिका छैन ? अन्य पार्टी सहित कांग्रेससमेत गणतन्त्रको पक्षमा लडेको होईन ? म त भन्छु, यो सबै उपलब्धिको श्रेय ज्ञानेन्द्रलाई जान्छ । ज्ञानेन्द्रले पार्टीहरुलाई जबर्जस्ती धकेलेर सडकमा पु¥याएपछि बल्ल गणतन्त्रको माहोल बनेको हो । माओवादीको कथित जनयुद्धले मात्रै आएको होईन ।
तर जनताले त यसको जस उनीहरुलाई नै दिए, जसका कारण निर्वाचनमा उनीहरुको जीत भयो । अहिले राज्यसत्ताको नेतृत्वमा छन् । यसको तपाईले रिस गरेर हुन्छ ?
भोटका आधारमा भन्नुहुन्छ भने त नेपालमा ३० वर्ष भोट पञ्चायतले पनि पाएको हो नि । नेपालमा कसरी भोट खस्छ, तपाईलाई थाहा छैन ? यहाँ कांग्रेस हुन पो सजिलो छ,नेकपा हुन पो सजिलो छ,तर राष्ट्रिय जनमोर्चा हुन त त्यति सजिलो छैन । त्यसकारण हामीले रिस गरेको होईन । जनताले राष्ट्रिय जनमोर्चाको नीति तथा कार्यक्रम हेरेर पक्षमा भोट हाल्नुपर्ने थियो नि । तर अवस्था त्यस्तो त छैन, यहाँ त जसले पैसाको खोलो बगाउन सक्छ,उसैलाई भोट हाल्ने चेतना भएका मतदाता भएको देशमा यस्तै हो । तर सँधै यस्तै अवस्था रहदैन । नेपाली जनताले बिस्तारै यो कुरा बुझ्दै जान्छन् । अनि स्वतः सहि बिचार,सिद्धान्तको पक्षमा जनमत सिर्जना हुन्छ ।
तपाईहरुले गलत भनेकै पार्टीहरुसँग अहिले पनि चुनावी तालमेल गरेर यहाँहरु संघिय र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्था किन त ?
तपाईंले बुझ्न जरुरी छ कि,नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई उनीहरुका बिचार सिद्धान्त र राजनीतिक एजेन्डाका आधारमा हामीले बर्गिकरण गरेका छौं । नेपालको कम्युनिष्ट पार्टी पनि विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको अभिन्न अंग भएकाले हामीलाई अहिले पनि अप्ठ्यारो अवश्य छ । यहि आधारमा हामी नराम्रामध्ये पनि राम्रो पार्टीसँग चुनावका लागि कार्यगत एकता गरेर गएका हौं । यहि आधारमा अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपासँग हामी चुनावी तालमेल गरेका थियौं र अहिले सरकारमा पनि हामीले सर्मथन गरेका छौं । यसको अर्थ हामीले तुलानात्मक रुपमा नेकपा जत्तिको विकल्प अर्को नभएकाले हो । हामीले एकता र संर्घषको सन्तुलन मिलाएर नै नीति बनाएका छौं ।
तपाईंहरु चुनावमा सँगै जानुभयो,सरकारमा पनि तपाईहरुको समर्थन छ । सरकारका दुई वर्षलाई हेर्दा यो सरकारको कामकारबाहीलाई कसरी समिक्षा गर्नुभएको छ ?
हामीले जे अपेक्षा गरेका थियौं । उनीहरुले केहि गर्न सकेनन । यो दुई तिहाईको मत जुन जनताले दिएका थिए, यसको अर्थ केहि परिवर्तनको आशा थियो । सरकारले सक्ने सामान्य काम पनि गर्न सकेन । दुई तीनवटा बजेट आयो । तर अहिले पनि कृषि नीति पुरानै छ । स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने थियो, तर सरकार माफियाको पछि लागेर अहिले गोविन्द केसीजस्ताको अनसनमा पनि दम्भ देखाईरहेको छ । सरकार नेकपाको हो,तर अहिले पनि ठुला ठेक्का पट्टा र लेनदेनमा पुरै काँग्रेससँग काँधमा काँध मिलाएर हिडेको छ । यसकारण आम जनताको जुन आशा थियो,त्यो कुनै पनि पूरा भएन ।
वर्तमान सरकारले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन । संघीयता बिरोधी तपाईहरुको एजेन्डा स्थापित हुँदैछ । लामो समय सत्ताको नेतृत्व गरेको काँग्रेस आफैं पतनको बाटोमा छ । यस्तो अवस्थामा अब राष्ट्रिय जनमोर्चा आगामी चुनावमा बहुमत ल्याउने गरि जुर्मुराउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन ?
चुनाव भनेको प्राविधिक कुरा हो । यसअघि पनि मंैले भने कि नेपालको सन्दर्भमा चुनाव बिचार वा सिद्धान्तले जित्ने होईन । यहाँ जसले पैसाको खोलो बगाउन सक्छ,उसैले चुनाव जितिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी आम जनतालाई जागरुक बनाउने, सचेत बनाउने प्रयास त अवश्य गर्नेछौं, तर पुरै बहुमत ल्याउने गरी तयारी गर्ने भन्ने कुरा मलाई महत्वपूर्ण लाग्दैन । किनकि आज पनि हाम्रो देशका जनताको चेतनास्तर हामीले सोचेजस्तो विकास हुन सकेको छैन । यद्यपि जनतामा जाने सहि बिचार, सहि सिद्धान्त र एजेन्डाबारे भने सचेत बनाउने काम जारी रहन्छ ।
तपाईहरुले चुनाव केहि होईन भनिरहँदा आजको दिनसम्म गलत कामबिरुद्ध सडक र संसद दुवै ठाउँबाट आवाज त उठाउन पाउनुभएको छ । भोलि यहि अवसरबाट पनि वञ्चित भइन्छ कि भन्ने लाग्दैन ?
हो,तपाईंले भनेझै यो खतरा पनि छ । यस्तो प्रतिगमन भयो भने पनि त्यसका बिरुद्ध सामाना गर्नुको विकल्प छैन । जनता प्रतिगमनको जुवामुनि जोतिएर बस्छन् र ? यसका बिरुद्ध सर्घष गर्नेछन र यसलाई परास्त गर्नेछन ।
अन्त्यमा सरकारले महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाबिरुद्ध गरेको तयारीलाई कसरी हेनुभएको छ ?
यो नेपालको मात्रै समस्या होईन । विश्वस्तरमा हेर्दा यो मानव जातिकै लागि चुनौति बनेको कोरोना महामारीसँग लड्न नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सहज त पक्कै थिएन । तर पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले निक्कै पहिलेदेखी सचेत बनाएको अवस्थामा तयारी पर्याप्त हुन नसकेको पक्कै हो । तर सरकारले अहिले गरेको प्रयासलाई सामान्य आँकलन भने गर्न मिल्दैन । अहिलेसम्म असाध्यै नराम्रो भएको केहि छैन । यो अझै भयावह हुने अवस्था कायमै छ । सरकारले अब थप तयारी गनुपर्ने कुरामा चुक्नु हँुदैन ।